Iyo Bhuku Rese Ongororo Nyanzvi Inofanirwa Kuverenga | Martech Zone
Bhuku Rese Analytics Nyanzvi Inofanirwa Kuverenga
Muvhuro, Ndira 23, 2012 Muvhuro, Ndira 23, 2012 Douglas Karr
Makore mashoma apfuura shamwari yangu yakanaka Pat Coyle, ane yake yemitambo yekushambadzira agency, yakandikurudzira kuverenga Moneyball. Nechimwe chikonzero kana chimwe chikonzero, ini handina kana kumboisa bhuku racho pane yangu kuverenga runyorwa. Mavhiki mashoma apfuura ini ndakatarisa bhaisikopo uye ndikarayira bhuku racho ipapo kuti ndikwanise kuchera munyaya yacho zvakadzama.
Ini handisi mukomana wemitambo… iwe unogona kunge usiriwo. Ini kazhinji handifarire chero koreji kana nyanzvi yemitambo mutambo kunze kwekunge iri Stanley Cup yakanaka. Kana iwe usingafarire zvemitambo asi iwe uchida nhamba, manhamba uye kuongorora, iwe unofanirwa kuverenga bhuku iri. Paul Depodesta (hunhu hwake ndiPeter Brand mumamuvhi akaridzwa naJonah Hill) huropi hwekuvhiya… kushanda kubva kuhuwandu kuti uone vatambi vanonangwa. zvichibva pane yavo yepasi-base. Izvo hazvina basa kana yaive imwechete, yakapetwa kana yakatofamba. Billy Beane ndiye mhasuru… General Manager uyo anobhejera timu yake uye basa rake pakushandisa zviga (pamwe nehutsinye hwekutengesa hunoburitsa mari yakawanda yetarenda) kutora ma Oakland A kune nhoroondo yekuhwina streak.
Ini handizokuvadza nyaya yacho iwe, asi heino pfupiso. Iwo ma Oakland A ane chetatu chebhajeti yematimu mazhinji kutenga tarenda. Kuti vakwikwidze, vaida chimwe chinhu - analytics. Iyo indasitiri yebaseball yakangofanana chero imwe indasitiri, sezvo yakura muzera, saizi uye hupfumi, ruzivo rwemasangano inomhanya yakadzika. Dambudziko nderekuti ruzivo rwemasangano rwakatadza… zvakanyanya kushata Mitambo yakaverengerwa uye yakarasika pamahita uye anomhanya, kwete pane zvikanganiso, kumhanya kumba kana kuhwinhwa nevatambi venyama, vatambi vane shaya. Funga nezve rako bhizinesi uye fungidziro dzaunoita nekuti zvaive nguva dzose wakaita nenzira iyoyo.
Dambudziko mu Indasitiri yeAnalytics zvakapetwa kaviri. Nepo matekiniki edu ekutengesa akachinja kupfuura yedu saiti uye kusangana kwevashandisi kwachinja zvakanyanya (nhare, vhidhiyo, piritsi, zvemagariro, nezvimwewo), paunopinda muwebhu yako analytics iwe unoona zvakanyanya zvatakaona makumi mashoma apfuura. Rimwe dambudziko nderekuti ruzivo rwemasangano rwakaisa chepfu panheyo dzeindasitiri iyi. Zvese zvechizvino ongororo uye ekuyera maturusi ari kubatsira ari kugadzirwa kunze iyo indasitiri.
Kubudirira kwevashandi vekutengesa kunowanzo kuverengerwa pamabhureki emitengo, kutarisisa peji, mafeni uye vateveri ... apo vangangodaro vasina kana huwandu hwehuwandu hwezvakabuda pamabhizimusi chaiwo. Ichokwadi kuti zvikanganiso nema homeruns zvinogona kuchinja kosi yemutambo we baseball, sekuwanda kwakaita kuwonekwa kwemapeji kunogona kukanganisa bhizinesi… asi mubvunzo ndewokuti chiratidzo chekuita here kana kuti chaicho chaunogona kukanganisa.
Izvo zvinonyanya kukosha kune bhizinesi rega rega zvese zvinotungamira uye shanduko. Funga nezve magadziriro aunoita analytics account. Mubvunzo wekutanga ndewokuti dunhu ripi dzako analytics ichaiswa pa ?! Ndizvozvo zvakaipa mubvunzo zvachose, mubvunzo unofanira kunge uri unowana sei vatengi? Zvino mubvunzo wenhau unofanira kunge uri wekuwana kupi kubva. Uye vangani vaunoda kukura navo. Panguva iyoyo, iyo analytics chikuva chinofanirwa kubatsira kutora ese stat uye ikubatsire kuti unzwisise kuti ndeapi anokosha uye asiri.
ose analytics nyanzvi inofanira kuverenga Moneyball uye gadzirisazve kunzwisisa kwavo kwe mashandisiro anoita mabhizinesi mhedzisiro online - kunyangwe iri ecommerce saiti ine yakananga kutengesa, webhu kuburitswa iyo inowana mari kuburikidza nekushambadzira mari inoenderana nekushanya, kambani yebasa inoda kutyaira kugadzwa, tekinoroji fekitori inoda mamwe madandemutande mademo, kana kambani iri kungoedza kukanganisa mafungiro uye kusvika kune kwayo brand.
dandemutande analytics ibasa rekunyengera rimwe chete… kuyedza kukodzera chishandiso chekare mune zvese izvi zviitiko zvitsva. Tinoda a itsva toolet iyo inotanga nemamiriro ezvinhu uye inotiratidza maitiro ekuyera kubudirira kune chero svikiro kana chikuva.
Tags: Analyticsbhizinesi analyticskutendeuka optimizationkutendeukazvinangwahit anomhanyainbound Marketingmutungamiri wechizvarwazvinoisamaribhuku remarimari yemubhaisikoponhamba
Maitiro Ekuwana SEO Kubiridzira
Diki Bhizinesi Yemagariro Cheat Sheet
Jan 23, 2012 pa 11: 02 AM
Iyo nyaya huru. Yakagadzira bhuku rakakura uye yakanaka bhaisikopo. Izvo zvakare hazvisi zvechokwadi. Beane akagara nhaka yepakati boka revatambi venyeredzi iro rakaisa pamwechete tambo yemwaka wakabudirira mwaka. Zvikwata zvake zvakatadza kubudirira kubva ipapo.
Izvo zvinoratidzwa neMoneyball ndezvekuti kuvaka hombe mune midhiya kunongoenderana nechekuita nekuita chaiko. Izvo zvakakosha kugadzira gwaro renhoroondo uye rinonakidza. Vezvenhau vanofuratira chero zvinopesana chokwadi kunze kwekunge mumwe munhu aine chishuwo chakasimba chekukanganisa rondedzero iyoyo.
Jan 23, 2012 pa 11: 18 AM
Iri bhuku rinonyatsotaura kune zvimwe zvekudzokera shure kubva kumaindasitiri muchitsauko chekupedzisira uye rinopa zvimwe zviitiko zvekutsigira iro dzidziso. Zvinotaridza senge Michael Lewis akapwanya mamwe minhenga mukati meindasitiri. Ini handina chokwadi chekuti zvimiro hazvisi izvo "chete chinhu" chinotyaira timu hombe. Mapoka akaita seYankees akatongwa nevamwe varairidzi vakura, vatambi vakuru vanogona kuita mukiriniki pamwe nehumwe humwe hunodakadza. Kana kuri kukanda nyaya yacho yese kusiri kwechokwadi, ndichafanirwa kupokana newe zvine ruremekedzo. Ma Oakland A's akashandisa nhamba kuongorora vatambi, uye zvimwe zvikwata zvinobvuma kutevera kwavo kutungamira mumashure.
Chero nzira, inyaya inoenderana nebhizinesi mune zvese. Vanhu kazhinji vanoita fungidziro panzvimbo pekutarisa humbowo huri pamberi pavo. Ndiyo tsika yenyaya pano.
Ndira 25, 2012 na5: 14 PM
Iyo blog inotumira nezve dzangu mbiri zvishuwo, baseball uye pasocial media? HONGU!
Iko musimboti weMoneyball kuri chaizvo nezve kunongedza zvisina kukosheswa pfuma kuvaka budiriro zvakanyanya. Kunyange vamwe vese vaive kunze vachibhadhara kubheta avhareji, kumhanya kumba uye ERA, Beane anga achitarisa paOBP. Uye iyo poindi vanhu vazhinji yavanosuwa ndeyekuti Moneyball haisi yekuvaka yakakomberedza OBP. Ndezve kuvaka pamusoro pesitendi isingakosheswi. Zvino sezvo ligi rabata uye OBP yave kukosheswa, Beane anofanira kugadzirisa.
Zvakafanana ichokwadi mukushambadzira kwedhijitari. Wese munhu anoti shandisa nguva yako nemari paFacebook, Twitter neGoogle +. Asi pamwe iyo isina kukosheswa pfuma ndeyePinterest, zvirinani kune yako brand, uye ichave iri inoshanda nyoro kudyara kwako.
Saka rega munhu wese asaite bofu achikanda mari kutenderera kumba kumhanya uye kurova avhareji. Iwe unozotarisa pane OBP (Pinterest). Izvo zvese nezve kusakwana kwemusika.